JW Library App: Tsvaga Zvaunoda muBhaibheri Kana Bhuku (iOS) | JW.ORG
Ita zviri pasi apa kuti ukwanise kutsvaga:
Paunenge wakavhura Bhaibheri, baya bhatani riri kuratidzwa pano, wonyora mashoko auri kutsvaga. Paunenge uchinyora, panobva mashoko anoda kuti fananei nezvauri kunyora. Baya shoko rauri kuda kana kuti baya Search kuti uwane zvauri kutsvaga.
Paunenge wakavhura bhuku racho, baya bhatani rekuti unyore zvauri kuda kutsvaga, wonyora mashoko ako. Paunenge uchitaipa, panobva pabuda mashoko anoda kuti fananei nezvauri kunyora. Baya shoko rauri kuda kana kuti baya Search kuti uwane zvacho zvauri kutsvaga.
Zvinhu izvi zvakatanga kushanda muna October 2014 paJW Library 1.3.4, inoshanda paiOS 1.3.4 zvichikwira. Kana usiri kuzviona, ona mirayiridzo iri papeji rakanzi “Tanga Kushandisa JW Library​—iOS,” pasi pemusoro wakanzi Wana Zvitsva Zviripo.
Kutsvaga muBhaibheri Kana Kuti Mubhuku​—iOS